आर्यन र मरिष्कामा को राम्रो किसर ? कसले कसको बारेमा के भने ? « Mazzako Online
आर्यन र मरिष्कामा को राम्रो किसर ? कसले कसको बारेमा के भने ?
अभिनेता आर्यन अधिकारी र अभिनेत्री मरिष्का पोख्रेलको जोडी अहिले फिल्म ‘के म तिम्रो होइन र’को कारण चर्चामा छन् । फिल्ममा यी दुइको जोडीलाई दर्शकले रुचाउने अपेक्षा गरिएको छ । फिल्म रिलिज नहुँदै ट्रेलरका कारण आर्यन र मरिष्काले खुबै चर्चा पाएका छन् ।
आर्यनको सिक्स प्याक शरीर र एक्सन, अनी मरिष्काको अभिनय र आकर्षक फिगरका कारण यी दुइलाई दर्शकले नोटिस गरिसकेका हुन् । फिल्म ‘के म तिम्रो होइन र’मा आर्यन र मरिष्काले लीप किस पनि दिएका छन् । हुनत, फिल्म भित्र ५ वटा यस्ता किस छन् । तर, ३ वटा मात्र लिप किस भएको आर्यन र मरिष्काले खुलाए ।
आर्यनको वुझाइमा फिल्म एउटा पूर्ण मनोरञ्जनको प्याकेज हो । यसैले पनि दर्शकले यो फिल्म हेर्छन् भन्ने उनलाई लाग्छ । एक अर्कासँग लीप किस गरेका आर्यन मरिष्काको वुझाइमा दुबै गुड किसर हुन् ।
आर्यनलाई मरिष्काले राम्रो किसरको रुपमा संज्ञा दिइन् । आर्यनले पनि मरिष्कालाई राम्रो किसर भने । तर, धेरै मान्छेको अगाडि किस गर्नुपर्ने भएकाले पनि एकान्तमा गरे जस्तो फिल नआउने आर्यनको भनाई छ ।
फिल्म ‘कोहिनुर’ निर्देशन गरेका निर्देशक आकाश अधिकारीले ‘के म तिम्रो होइन र’ हिट हुनेमा कुनै शंका नै नभएको बताउँछन् । अधिकारी व्रदर्सको प्रस्तुती र द स्काई मुभिजको सहकार्यमा यो फिल्म निर्माण गरिएको हो ।
फिल्मलाई लिएर अहिले दर्शकमा उत्सुकता र कौतुहलता दुबै छ । वैशाख ३१ गते नेपाली र हिन्दी फिल्म नभएकाले पनि यो फिल्मले देशभरका ठूला र राम्रा हल पाउने भएको छ । मल्टिप्लेक्सदेखि सिंगल थिएटरसम्म फिल्मले राम्रो शो पाउने आकाशले बताए ।
आर्यन र मरिष्का फिल्मलाई लिएर उत्साहित छन् । आर्यन त किटान गरेरै भन्छन्–‘फिल्म चल्न लाग्दा डर लागेको छैन । किनकी, यो फिल्ममा हामी सबैले मिहिनेत गरेका छौ ।’